IINDLELA EZILI-15 ZOKUTHINTELA UMHLAZA WOLUSU, NGOKUTSHO KWEDERMATOLOGISTS - UMHLAZA WOLUSU
Iindlela ezili-15 eziNceda ukukhusela umhlaza wolusu, ngokutsho kweDermatologists
Eyona / Umhlaza Wolusu
U-Edor Dorottya / EyeEmImifanekiso kaGetty
Eli nqaku lahlaziywa kwezonyango nguMona Gohara, MD, ugqirha wesikhumba oqinisekisiweyo kunye nelungu leBhodi yoPhononongo lwezoNyango.
Unokuyihoxisa imbono yomhlaza wolusu kwaye ucinge ukuba ngekhe kwenzeke kuwe-okanye ukuba kuyenzeka, uyakususwa imole. Akukho nto inkulu, akunjalo?
Hayi ngokukhawuleza. Umhlaza wolusu yiyo isifo somhlaza esiqhelekileyo e-United States, kwaye unyango lunokubandakanya okuninzi kunokususa imole (inkqubo yotyando enokushiya isiva), ngokwe Isikolo saseMelika seDermatology (AAD).
Akukho nto efana nokuhlinzwa ebusweni bakho ukuze ucinge ngokwenene, Kulungile, yintoni ebangela oku, kwaye ndingenza ntoni ukuthintela nantoni na ukuya phambili? utsho UAlysa Herman, MD , ugqirha wesikhumba oqinisekisiweyo osebenza kwiCoral Gables, FL, kunye nesithethi se Isiseko seCancer Cancer .
Ngaphezulu, umhlaza wolusu-ngakumbi imelanoma , sesona sifo sinzulu — sinokusasazeka siye kwamanye amalungu omzimba size sibulale. Ngelixa i-melanoma i-1% kuphela yomhlaza wolusu, ikhokelela kuninzi lokufa komhlaza wolusu.
Ngethamsanqa, zininzi izinto onokuzenza ukunciphisa umngcipheko-kunye nokuhamba phambili kwangoko ukuba ubonakalisa iimpawu zesifo. Ukunqanda umhlaza wolusu , Landela ezi ndlela zokugcina ulusu dermatologists bafuna ukuba uqale ukuthatha i-ASAP.
1. Kuqala, cinga ukwanda kwelanga okwandayo.
Umhlaza wolusu ubangelwa Ngokuvezwa okungapheliyo okwenzeka rhoqo, hayi nje ukuqhushumba elangeni apha naphaya, utshilo uGqirha Herman. Cinga ngawo onke amaxesha ufumana ukubonakaliswa kwe-ultraviolet (nangeentsuku ezinamafu): uhamba uye emotweni yakho, ukhupha inkunkuma, uhamba nenja yakho, uhamba uhamba, uqhuba (ewe, imitha ye-UV inokungena kwi-windshield yakho nakwiifestile zemoto!) .
Awunakucinga ukuba la maxesha ngaphandle kubalwa, kodwa ayenjenjalo. Ufumana ukuvezwa okungakumbi ngemoto kwaye uhambahamba kunokuba ubona, yiyo loo nto ukunxiba izithambisi zokhuselo lelanga Yonke imihla ibaluleke kakhulu, utshilo uGqirha Herman.
2. Thatha inyathelo nokuba unjani umbala wolusu lwakho.
Umhlaza wolusu unokwenzeka konke ubuhlanga, kubandakanya abantu bebala, utsho Yolanda Lenzy, MD , ugqirha wesikhumba oqinisekisiweyo kunye ne-cosmetologist enelayisensi eChicopee, MA. Ngapha koko, inkwenkwezi ye-reggae uBob Marley wasweleka ngenxa ye-melanoma ebulalayo elunyaweni.
Ngelixa kuyinyani ukuba ulusu olunombala ongaphezulu lunokwehlisa umngcipheko wokuba nomhlaza wolusu, imiboniso yophando ukuba abantu bebala basweleka kwi-melanoma kwizinga eliphezulu kunabantu abamhlophe. Ngaphezulu, jonga ukuba leliphi ilanga elinokukwenza kulusu lwakho ngokubanzi, utsho USusan Chon, MD , uprofesa wesikhumba kwiYunivesithi yaseTexas MD Anderson Centre yeCancer. Oko kunokuba kukudumba, imibimbi, okanye umbala ongalinganiyo.
3. Sukucinga ukuba ugwetyiwe.
Nokuba ubungumntu othembekileyo okanye umlondolozi wosapho kwiminyaka yakho yeshumi elivisayo, usengacothisa isantya okanye isixa sokuvezwa okufumanayo ngoku. Akuzange kube semva kwexesha, utsho uGqirha Chon. Ndinezigulana ezitshintsha ukubonakaliswa kwazo kunye nokuziphatha, kwaye kulula ukubona kungaphelanga nonyaka ukuba ulusu lwabo lubukeka ngokwahlukileyo. Awuthinteli nje umhlaza wolusu-ukwazibekela imibimbi, amabala elanga , kunye nezinye izinto ezonakalisa ulusu kwimitha ye-UV.
4. Gcina i-sunscreen yakho ecaleni kwentlama yamazinyo.
Phakathi kokondla izilwanyana, ukuqhuba abantwana, ukubiza abazali, ukuthenga ukutya, kunye nalo lonke uxanduva lwakho, kunokuba nzima ukukhumbula ukubeka i-sunscreen yonke imihla. Ingcebiso kaGqirha Herman? Yenze inxalenye yenkqubo yakho yasekuseni: Gcina i-sunscreen oyithandayo (leyo isebenza kakuhle ngohlobo lolusu lwakho) kufutshane nentlama yamazinyo ukuze ukhumbule ukudibanisa ezinye emva kokuxubha amazinyo.
Ingcebiso yepro: Musa ukulibala iincopho zezandla zakho , indawo ekungaqhelekanga ukuyihoya efumana ilanga elininzi, ngakumbi xa uqhuba.
5. Sebenzisa i-sunscreen eyaneleyo.
Akwanelanga ukubetha nje kancinci kwaye ubize usuku. Ukuwugquma ngokufanelekileyo nangokugqibeleleyo umzimba wakho, I-AAD ithi uyakufuna i-ounce yemveliso-eyoneleyo yokugcwalisa iglasi. Ngobuso bakho ngokukodwa, jolisa kwinani elilingana nenickel. Ngelixa ulapho, ungazilibali iindlebe zakho, intamo, kunye neentloko zeenyawo zakho. Isikrini sakho selanga kufuneka sibe yi-SPF 30 okanye ngaphezulu kwaye, okona kubaluleke kakhulu, sisetyenziswe kwakhona qho emva kweeyure ezi-2 ukuya kwezi-3, utshilo uGqirha Lenzy.
ILa Roche-Posay Anthelios inyibilike-kwi-Milk kwi-sunscreen SPF 100amazon.com THENGA NGOKU I-EltaMD UV Ecacileyo yoBuso beScreen kwi-Broad-Spectrum SPF 46amazon.com$ 37.00 THENGA NGOKU I-Blue Lizard Australian Sunscreen, iSensitive SPF 30+Walmart.com$ 14.98 THENGA NGOKU I-MDSolarScience Inzululwazi yeMaminerali yoKhuseleko lwe-SPF 50amazon.com$ 39.00 THENGA NGOKU
6. Zama imixube eyahlukeneyo yokuthambisa i-sunscreen.
Zonke izithambisi zokhuselo lwelanga zenziwe ngendlela eyahlukileyo ukuze ubume bohluke, utshilo uGqirha Chon. Zininzi kakhulu ngoku kangangokuba ndikhuthaza abaguli ukuba bazame ezimbalwa. Unokumangaliswa yindlela othanda ngayo, ngakumbi kuba ngoku kukho iimveliso ezilungiselelwe zona ulusu olunamaqhakuva , imibala entsonkothileyo enobuzaza , kunye iithoni ezinzulu zolusu .
Ukuba uthenga enye ebusweni bakho kodwa ungayithandi, yisebenzise kuwo wonke umzimba wakho (ngoko ayisiyonkcitho yemali). Isaza kwenza umsebenzi wayo, utshilo uGqirha Chon.
7. Zenzele owakho umthunzi.
I-sunscreen kufuneka ibe yindawo yakho yokuqala yokuzikhusela kwimitha yelanga eyingozi nokuba uphi-kodwa ayifanelanga ukuba yeyakho kuphela. Ukuba ungaphandle kwaye kunokwenzeka ukuba ungene emthunzini (yithi, phantsi komthi okanye isambrela), yenze.
Yenza umahluko omkhulu, utshilo uGqirha Chon, okwacebisa ukuba kusetyenziswe impahla ekhusela ilanga (ene-UPF okanye i-ultraviolet factor factor) njengendlela yomthunzi, ngakumbi ukuba uselangeni ixesha elide. Iimpawu ezininzi ezinje imbaleki kwaye Lululemon ndineempahla ezikalwe nge-UPF ngoku.
Ukuba uyathanda ukubaleka okanye ukuhamba intaba, zama a rashguard . Ziyasebenza kakhulu kwaye zigubungela zonke ezo ndawo kunzima ukufikelela kuzo njengamagxa akho, umva, nentamo, utshilo uGqirha Chon.
8. Yazi ukuba ujonge ntoni.
Zintathu iindidi eziphambili zomhlaza wolusu- iseli esezantsi , iseli ebambekayo , kunye imelanoma —Naye banokubonakala ngokwahlukileyo , utsho uGqirha Herman. Olunye umhlaza womhlaza kunokuba nzima kumntu ophakathi ukuba awubone njengoko ufana ne-eczema, ulusu olomileyo, okanye ukhwekhwe.
Ingcebiso kaGqirha Herman? Ukuba unokukhula okutsha okanye ibala eliguqula umbala, ukhula, ukopha, ungaphilisi, kubonakala ngathi kuyaphilisa kwaye emva koko ukhwela ngaphezulu, okanye kubonakala ngathi kumkile kwaye kubuye kubuye, zonke ezo zizimpawu ezilungileyo zokuba kufuneka uhlolwe. ngugqirha wesikhumba uyacebisa.
Ugqirha Lenzy ucebisa ngokujonga umzimba wakho uphela (kubandakanya izandla neenyawo) ubuncinci kanye ngenyanga kunye nokubona ugqirha wesikhumba kuvavanyo olusisiseko, ubuncinci kube kanye ngonyaka.
9. Fumana ugqirha wesikhumba omthandayo.
Njengawo nawuphi na umcimbi wezempilo, ukuba uyavana kwaye uyamthemba ugqirha wakho, uya kuba nakho ukubambelela kwinkqubo yokhathalelo. Kukho i Isixhobo kwiwebhusayithi ye-AAD Kulungile kuba ungakhangela i-dermatologists ngokusekwe kwikhowudi yakho ye-zip okanye uhlobo lomcimbi wesikhumba onawo, utshilo uGqirha Chon. Kwaye, uthi, unokuphumla ngokulula ukwazi ukuba wonke umntu okwiziko ledatha ngugqirha wesikhumba oqinisekisiweyo webhodi.
10. Buza iderm yakho ukuba ufanele ukubabona kangaphi.
Kuya kufuneka ube notyelelo olusisiseko kunye nedermatologist onokujonga ulusu lwakho ukusuka entloko kuye ezinzwaneni, kubandakanya amabala ekunzima ukuwabona anje ngomqolo wakho, isikhumba sentloko, kunye neenyawo zeenyawo zakho. Emva koko, akukho ubungakanani obulingeneyo yonke imithetho malunga nokuba kufuneka ubuye kangaphi ukuze uhlolwe.
Yinto yobuqu ngokwenyani, kuxhomekeke kwimbali yosapho lwakho, iimeko zomngcipheko wakho, okanye imbali yakho yomhlaza wolusu, ucacisa uGqirha Chon. Ukuba kukho nantoni na onemibuzo ngayo kulusu lwakho, jonga ugqirha wesikhumba; emva koko, wena nogqirha unokuthatha isigqibo sokuba ufuna iimviwo rhoqo.
11. Thatha iifoto.
Ukuzama ukukhumbula ngokuchanekileyo ukuba yintoni i-mole okanye irhashalala kubonakala ngathi kwiinyanga ezininzi ezidlulileyo kunzima-kwaye ukuzama ukuyicacisa kugqirha wakho kunzima ngakumbi. Ukuba ubona into malunga nayo, thabatha ifoto kwi-smartphone yakho. Yindlela elula yokuba nohlobo oluthile lwamaxwebhu abhaliweyo, idatha yedatha yokuba ibijongeka njani kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo okanye kwinyanga ephelileyo ukuze ukwazi ukuyibeka iliso, utshilo uGqirha Herman.
Izigulana ezine-moles ezininzi zihlala zithunyelwa kubaphuli-zithombe abanobuchule kwimephu yeemole. Umfaki-zithombe uya kuthatha imifanekiso yomzimba womntu wonke kwiindawo ezithile ukuze ugqirha wesikhumba abone utshintsho olufihlakeleyo ngokuhamba kwexesha.
12. Musa ukukubekel 'amangomso ukuqeshwa.
Ngokukhawuleza xa ubona ugqirha wesikhumba, uya kukhawulezisa ukujongana nayo nayiphi na imiba eza kunye, utshilo uGqirha Chon. Oko kubaluleke ngakumbi xa kufikwa kumhlaza wolusu. Xa incinci kwaye iqala nje, kulula kakhulu ukuyinyamekela, utsho. Ukuba kusekuqaleni, kungcono kakhulu.
Uthi ezinye izigulana zinenkxalabo yokuba ziyasabela kwaye ziyamchitha ngexesha lakhe ukuba indawo iyabonakala ukuba inobungozi, kodwa ayiyonyani leyo. Lowo ngumsebenzi wam, yiyo loo nto ndilapha, utsho. Akukho bungozi ekuhlolweni. Kwaye ngokungafaniyo nolunye uhlolo lwezempilo, ukuhlolwa kolusu kuhle kwaye akufuneki kulungiselela kwangaphambili ngaphambi kwexesha.
13. Nikela ingqalelo kwinto oyityayo.
Kukho isizathu sokuba iingcali zokutya zithi kufuneka ugcwalise ipleyiti yakho ngokudibanisa iziqhamo kunye nemifuno egqamileyo: Zonke ezi zinto zinento esiyibiza ngokuba zii-phytonutrients— 'phyto' intsingiselo yezityalo, ke izondlo ezivela kwizityalo- kunye neantioxidants ezikhusela kakhulu kwi-radical free Umonakalo esikhumbeni, utsho uGqirha Herman. (IiRadicals zasimahla ziimolekyuli eziyingozi ezivela kwindalo ebangela ukonakala kolusu ekuhambeni kwexesha.)
Ucebisa ukutya ukutya okupheleleyo kuba banokuba nezinye izakha mzimba esingazifundanga malunga nazo ezinokuthi zisebenze ngokudibeneyo nabanye esaziyo ngabo.
Kunye nale migca inye, unokufuna Nciphisa utywala kwaye qhubeka uyonwabela ikofu yakho ene-caffeine -Izicwangciso ezibini zophando ezibonisa ukuba unokunciphisa umngcipheko we-melanoma.
14. Buza i-doc yakho malunga nezongezo zokukhusela ilanga.
Ukuba uhlala usitya imveliso etyebileyo yezondlo kuluhlu olubanzi lwemibala, sele unika umzimba wakho uninzi lweevithamini kunye neeminerals ezixhasayo. Kodwa ezinye izongezo zinokunceda ukukhaba ulusu lwakho ukukhusela kancinci.
UGqirha Herman uthi uphando ngoku luxhasa izongezo ezibini. Eyokuqala yile Heliocare , Equlathe isicatshulwa sesityalo esibizwa ngokuba Isicatshulwa sePolypodium leucotomos oko kunokunceda ukukhusela ulusu lwakho kwii-radicals zasimahla. Ke, kukho niacin (i-vitamin B), enokunciphisa umngcipheko weesquamous-cell kunye ne-basal-cell cell cancer. Ngaphambi kokuzama isongezelelo esitsha, thetha nodermatologist wakho ukubona ukuba iyavakala na kuwe.
15. Phonononga nawaphi na amayeza owasebenzisayo.
Amanye amayeza anokubangela utshintsho kulusu lwakho olwenza ukuba lubonakale ngakumbi kukuvezwa kwe-ultraviolet. Izizathu eziqhelekileyo zibandakanya amayeza athile e-cholesterol, ii-antibiotics, ii-antifungals, i-NSAIDS, kunye neepilisi zokulawula ukuzalwa. Asinguye wonke umntu ophendula ngendlela efanayo kwiziyobisi, ke jonga olu luhlu lwamayeza avela kwi-FDA kwaye uthathe amanyathelo ongezelelweyo okukhusela ukuba kunokwenzeka ukuba uthathe enye yazo. Xa ungathandabuzeki, qiniseka ukuba uhamba ngaphezu kwayo nayiphi na imiphumo emibi kunye nogqirha wakho okanye ukhemisti.
Izibonelelo zabakhenkethi abamnyama
ingakanani ipotassium kwindawo ebhanana
I-balm ye-lip efanelekileyo kakhulu kwimilebe ekhethiweyo